Fekitori yekubuda - Intec Printing Solutions Ltd
Kugamuchirwa kune yedu Factory Outlet peji
Nguva nenguva, Intec ine stock isingakwanise kutengeswa kuburikidza nematanho edu ekuparadzira epasirese. Izvi zvigadzirwa, kana zviripo, zvichaziviswa kuburikidza nefekitori yekubuda uye zvinotengeswa pane yekutanga kuuya, yekutanga kushumirwa, hwaro.
Izvi zvichave zvigadzirwa zvinoshandiswa kuratidza showroom uye sampuli kugadzirwa.
Izvi zvigadzirwa zvakashandiswa pazviratidzwa zvinoda kutengeswa semidziyo yakashandiswa.
Dzimwe nguva chigadzirwa chinosvika mudura redu chakakuvadzwa. Zvigadzirwa zvinogadziriswa zvakatariswa uye kurongedzerwa mupachena / asina branded kurongedza.
Iyi stock ndeyechinyakare, isiri-ikozvino vhezheni kana kupera kwezvigadzirwa zvemitsetse.
Model - FB750 - kurongedza, prototyping, poindi yekutengesa yekucheka
Chikonzero chekutengesa - ex-demonstration unit
Condition - pristine mamiriro
nzvimbo - inowanikwa kubva kuIntec UK
garandi - 12 mwedzi
mutengo - POA mumari yako
Model - FB550 - kurongedza, prototyping, poindi yekutengesa yekucheka
Condition - pedyo pristine mamiriro
Model - ColorFlare CF1200LX - nyanzvi yesimbi foiling, yakakosha mhedzisiro uye laminating muchina
Chikonzero chekutengesa - ex demonstration unit
Condition - padhuze nemamiriro ekunze (zvishoma zvekukwenya pafuremu)
nzvimbo - inowanikwa kubva kuIntec USA
mutengo – POA US$
Muenzaniso - ColorCut LC600PRO - zvizere otomatiki label cutter
Chikonzero chekutengesa – fekitori re-pack
Condition - sezvitsva
Muenzaniso - ColorFlare CF350 -Desktop muchina wekushandisa esimbi foils & yakakosha mhedzisiro
Chigadzirwa - Gloss Laminate 1000 Meter Roll
zvinosanganisira -Kushandisa neIntec LCF215 Label Finishers
Chikonzero Chekutengesa - kupera kwemutsara chigadzirwa
Condition - itsva
mutengo - POA muUS $
Matt Laminate 1000 Meter Roll
Chigadzirwa - Intec Holographic Crystal Flaring Firimu
zvinosanganisira - 300 metres roll ye holographic firimu
Chikonzero Chekutengesa – special offer
mutengo - US $ 299.00
Chigadzirwa - Intec CP2020 Printer Consumables
chitsamba - yekupedzisira stocks
Chikonzero Chekutengesa – chigadzirwa siyana inofanira kurega
mutengo - CLEARANCE ZVINOPA - POA mumari yako
muzinda wepasi rose